Transforming Lives Through Education Opportunities - Telling the Real Story
Fathi Mohamed Ubahle
"Talada kaliya ee aan ku siinayo iyaga ayaa ah inaad wax walba tijaabiso, Haddii aadan duuli karin, waa inaad oroddaa oo haddii aadan orod karin, soco, haddii aadan socon karin, gurguurto laakiin si kasta ha u joojin. Waa inaad iskuday oo iskuday, waa wadada kaliya, waligaa ha quusan." Ayuu yidhi Fatxi.
Kani waa mantra ay ku noolyahey Fatxi Maxamed Ubaxle oo 20 jir ah. Qaxooti ahaan xerada AwBarre oo ku taal magaalada Jijiga, ee dalka Itoobiya, wuxuu ku hamiyi jiray inuu noqdo dhakhtar ilaa yaraantiisii. In kasta oo qoyskiisa ay ka maqnaayeen ilaha dhaqaale ee ay ku taageeraan riyadiisa, haddana waxay siiyeen taageero shucuur oo aan leexleexanayn. Mahadsanid deeqda waxbarasho ee DAFI, wuxuu awooday inuu sii wato shahaadada koowaad ee cilmiga teknolojiyadda shaybaarka caafimaadka ee Jaamacadda Adigrat ee Itoobiya.
Sanadka 2020, isaga oo jirto 100 maalmood oo qura inuu qalinjabiyo, xiritaanka jaamacadiisa COVID -19 sababtuna tahay carqaladeynta qorshayaashiisa oo dhan markii qalin jabinta dib loo dhigay aan la cayimin
"COVID-19 ayaa saameyn igu yeeshay aniga oo joojiyay wax walba oo aan qorsheeyay. Waxaan ku dhowaanay qalinjabinta ka dib waxbarashadaydii dib ayaa loo dhigay waqtigaas." Ayuu dib u xasuustaa.
Fatxi aakhirkii wuu qalin jabiyay. Isaga iyo qaxootiga kale ee ka qalin jabiyay, wuxuu ka qeyb galay aqoon isweydaarsi ay bixisay hayada UNHCR Telling the Real Story (TRS) kaas oo looga gol lahaa in lagu taageero qaxootiga danaynaya in ay sii wataan waxbarashadooda iyadoo loo marayo mashruuca UNICORE ee deeqda siiya 43 ardayda qaxootiga ah. raac barnaamijka mastarka ee mid kasta oo ka mid ah 24 jaamacadaha Talyaaniga.
Iyada oo loo marayo aqoon isweydaarsiga TRS, ardayda waxaa la siiyay kombuyuutarrada gacanta, oo laga caawiyay inay maraan bogagga deeqda waxbarasho, waxaana la siiyay tababaro wareysi si loogu diyaariyo wareysiga gelitaanka muhiimka ah.
"Waxaan codsaday jaamacad la yiraahdo Milano University barnaamijka aan dalbadayna wuxuu ahaa cilmiga teknolojiyada iyo daawada monocular. Dabcan aad baan u argagaxay maxaa yeelay waxay ahayd markii iigu horeysay ee aan dalbado deeq waxbarasho oo ah waxbarasho dheeri ah oo ka baxsan Afrika." Ayuu yidhi Fatxi.
Fatxi waa laga aqbalay barnaamijka riyadiisuna ahayd inuu noqdo dhakhtar hada waa la gaari karaa. Wuxuu rajeynayaa inuu waxyaabo badan ogaado inta uu joogo Talyaaniga.
"Milan waa xarunta Fashionka marka laga hadlayo Talyaaniga, sidoo kale waxaan rabaa inaan wax ka ogaado cunadooda iyo dhaqankooda. ” Ayuu raaciyay.
Mohamed Hassan Malin
Maxamed oo 23 jir ah ayaa ugu weyn qoyskiisa. Ahaanshaha curadka wuxuu ku beeray dareen mas'uuliyad ah qoyskiisa oo keliya laakiin bulshadiisa.
"Caruurnimadaydii, waxaan marwalba ku riyoon jiray inaan noqdo qof had iyo jeer wax ku soo kordhiya bulshadayda, si aan u xoojiyo waxna u baro bulshadayda, waxaan marwalba ku riyooday inaan noqdo bini'aadanimo. ” Ayuu yidhi Maxamed.
Darawalkani wuxuu u horseeday inuu qaato shahaadada cilmiga bulshada ee Jaamacadda Adigrat ee Itoobiya halkaas oo uu ku lahaa dhibcaha labaad ee ugu sarreeya ee 3.82 ka mid ah 4. Ka dib qalinjabinta, wuxuu raadsaday fursado shaqo oo aan waxba ka tarin. Cudurka 'COVID-19' dillaaca ayaa sii xumeeyey xaaladda wax walboo uu rajeynayeyna waxay umuuqdeen kuwa aan la gaarin.
Kulan wacyi gelin ah oo uu ugu sheegayo mashruuca sheekada dhabta ah ee ku saabsan fursadaha deeqaha waxbarasho ee ay heli karaan qaxootiga, wuxuu ka bartay Mashruuca UNICORE Deeqaha.
Maxamed wuxuu codsaday inuu barto Xiriirka Caalamiga ee Jaamacadda Palermo iyo Xiriirka Caalamiga iyo daraasaadka Yurub ee Jaamacadda Florence. Waxaa wareystay oo aqbalay labada jaamacadood.
“Waxay ahayd markii iigu horreysay ee abid la wareysto sidaa darteed haa; Waan yara argagaxay. Kalsooni ayaan ku qabay naftayda maxaa yeelay waxaa la i siiyay wax walba oo i diyaariya. ” Wuxuu yidhi.
Warka ah in uu wareysan doono labada jaamacadood waxaa la kulmay farxad qoyskiisa iyo asxaabtiisa.
Markuu tago Talyaaniga, wuxuu rajaynayaa inuu barto dhaqanka iyo luqadda oo uu kusii wado jidkiisa inuu noqdo bani'aadamnimo.
Saaxiibbadiis iyo asxaabtiisa kale ee qaxootiga ah, wuxuu ku dhiirrigelinayaa inay rumaystaan ​​fursadaha deeqda waxbarasho oo uu isu arko inuu markhaati u yahay in qof kasta oo go'aan iyo dadaal leh uu heli karo deeq waxbarasho wuxuuna ku dhiirrigelinayaa asxaabtiisa inaysan dhageysan sheekooyinka xun.
"Saaxiibbadii aan kulahaa xerada waxay isaga baxeen jaamacadda maxaa yeelay waxay u qaateen in deeqaha waxbarasho ay yihiin been abuur," ayuu yiri Maxamed. "Talada aan siinayo waa inaanan quusan, rajadana ha lumin. Isbadal wanaagsan samee, noqo qof ka duwan . ” Ayuu raaciyay.